Inhloko ZeNdaba Mabasa 13, 2021
Mabasa 13, 2021
UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ele Zimbabwe liphakathi kwamazwe awezwekazi le Africa, aphezulu kuluhlu lwalawo aqhuba kakhuhle uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ukubanjwa yiCovid-19, eye Vaccine. Kodwa lokhu kwenzakala ngesikhathi ingcitshi zezempilakahle zisithi amajekiseni alungiswa kweleChina kawakasebenzi okwezinga laphezulu.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba kulabazinkulungwane ezedlula ezilitshumi-10,681, abahlatshwe ijekiseni yakuqala eyeCOVID-19 Vaccine, ngokutshona kwelanga layizolo, okukhupule inani lasebehlashiwe leyi ijekiseni eZimbabwe, kusukela lolu hlelo luqalileyo ngoNhlolanja, kwabazinkulungwane eziphose zifike amakhulu amabili-205,275.
Inani lasebetholakale beleCovid 19 lokhu laqhamukayo eZimbabwe nyakenye, sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane- 37,307. Okulinani eligoqela inkulungwane ezingamatshumi phose amathathu lanhlanu- 34,901, labagule basila kulumkhuhlane, labulala abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye-1,542.
Kweziphathelane lomnotho namhlanje: Osomabhizimusi kanye labacubungula ezenotho bathi umthelo werayisi uhulumende athi kumele uhlawulwe ngamankampani kubuyelwa emuva kumnyaka ka2017 uzabulala amabhizimusi njalo ulimaze labathengi.
Kwezemidlalo…….Inhlanganiso yeInspire Women, Men and Children Trust idingele abadlali bomdlalo wenguqu abasedolobheni lako Bulawayo izicathulo zokusebenzisa, ama shooters, ezilikhulu lamatshumi amahlanu..
Ku Livetalk namhlanje kuhlelo “The Connection” sixoxa labatsha abakubhizimusi kunhlangothi ezitshiyeneyo zempilo ngenhlupho ababhekane lazo ngalezi zikhathi zokumelana leCovid 19.